I-ZTE Axon 7, uhlalutyo lwexabiso eliphezulu kakhulu lemali | I-Androidsis
I-ZTE Axon 7, le yeyona smartphone iphambili ye-Android enexabiso elifanelekileyo lemali
UAlfonso de Frutos | | Reviews, ZTE
ZTE Yayiwela inyathelo elinye emva kukhuphiswano lwabo. Iitheminali zazo ezikumgangatho ophezulu azithengisanga ngokwaneleyo eYurophu kwaye, nangona kunjalo izisombululo ezinkulu ezinje nge-ZTE Axon EliteUkungaqiniseki kwayo ngokwesiko kunye noyilo olungathandekiyo kwakuthetha ukuba ukuthengisa kwakungekho njengoko kulindelwe. Isisombululo? Entsha ZTE Axon 7Itheminali efikelela kwintengiso kunye nesifundo osifundileyo.
Ukuba uluntu lwaseYurophu alufuni iitheminali ngombala wegolide? Siyayisombulula. Ukuba uyilo lwangaphambili lwe-Axon Elite uluhlu alusebenzi nje? Sihlengahlengise isiphelo sendlela ukuba sinikezele nge-smartphone ebabazekayo ngexabiso eliqhekezayo: i-450 euros. Ngoku ndikuphathele Uphononongo lwevidiyo ye-ZTE Axon 7, Ngaphandle kwamathandabuzo isiphelo esiphakamileyo se-smartphone esinexabiso elifanelekileyo lemali.
1 Uyilo: isinyithi sisefashini kwaye i-ZTE Axon 7 iyinxiba ngokuzingca okukhulu
2 Iimpawu zobugcisa ekuphakameni kwinqanaba eliphezulu
3 I-UI yam yeFavorite i-ZTE Axon 4.0 ilunge kakhulu
4 Isikrini se-AMOLED QHD, indibaniselwano egqibeleleyo
5 Umgangatho wesandi onomdla okumema ukuba ukonwabele iimovie kunye nabahlobo bakho
6 Isivamvo esikhulu somnwe
7 Ukuzimela ngokuchanekileyo
8 Ikhamera elungileyo eya kuthi ngaphezu kokuhlangabezana nokulindelweyo kwawo nawuphi na umsebenzisi
8.1 Imizekelo yeefoto ezithathwe nge-ZTE Axon 7
9.1 ZTE Axon 7 Gallery Gallery
Uyilo: isinyithi sisefashini kwaye i-ZTE Axon 7 iyinxiba ngokuzingca okukhulu
Umkhwa wokusetyenziswa kwe izinto zepremiyamu Kwiitheminali eziphezulu ziyinyani: ii-smartphones ezine-aluminium ezigqityiweyo zilapha ukuze zihlale. Xa i-Samsung yathatha isigqibo sokufuduka kwi-polycarbonate kwiiflegi zayo kwizizukulwana ezimbalwa ezidlulileyo kwacaca ukuba le yindlela ekufanele ihanjwe. Kwaye i-ZTE ayizukubangaphantsi.
Ukufunda kwiimpazamo zangaphambili, ezinje ngesikhumba esingeyonyani se-Axon Elite, umvelisi waseAsia uthathe isigqibo sokubheja emzimbeni ongenabody owenziwe ngealuminium ngokupheleleyo. bonelela i-ZTE Axon 7 uyilo olunomtsalane kunye nomgangatho.
Kwimeko yomsebenzi omtsha womenzi waseTshayina, sifumana ifowuni eyenziwe ngealuminium, hayi umkhondo weplastiki. Ngenxa yoku bathathe isigqibo sokulandela indlela ebekwe yi-HTC ngokunikezela ezinye Amacandelo amancinci ajikeleze i-terminal kwaye kulapho kukho ii-eriyali zefowuni, ukunqanda ukwaphula i-aesthetics ye-smartphone.
Imidlalo yeZTE Axon 7 a ugobile owenza ukuba ifowuni izive ilungile esandleni. Ukubambelela kungaphezulu kokuchanekileyo kwaye, nangona umkhono werabha okhuselayo ungena ebhokisini, bendisebenzisa i-ZTE Axon 7 ngaphandle kokhuseleko kwaye khange ityibilike nangaliphi na ixesha.
Kwaye ifowuni ikhangeleka ilungile, ibanjwe kamnandi kwaye, ngaphandle kwesikrini sayo esine-5.5-intshi, isixhobo sinokusetyenziswa kakuhle ngenxa yemilinganiselo ethintelweyo: i-ZTE Axon 7 Imilinganiselo ye-151,7 x 75 x 7,9 millimeters.
Isiphelo sisomelele, sayo 185 iigram zobunzima Bayayiqinisekisa, nangona ingazikhathazi imihla ngemihla. Ngaphambili sifumana isikrini esisebenzisa amacala kakuhle, sifikelela kumyinge wama-72.2% enkosi kwizakhelo ezincinci. Kwaye sithathela ingqalelo ukuba le fowuni ibandakanya izithethi ezibini ngaphambili, kufuneka siqaphele umsebenzi olungileyo womenzi.
Ulawulo lwevolumu kunye nokucima / ukucima amaqhosha efowuni abekwe kwicala lasekunene le-ZTE Axon 7. La maqhosha abonelela ngohambo olulungileyo kunye nokuchasana kakuhle noxinzelelo, enika ukugqitywa kwesinyithi ukuziva uzinzile.
Icala lasekhohlo kulapho siza kufumana islot ukufaka ikhadi le-nano SIM kunye nekhadi le-SD encinci, ngelixa emazantsi kukho kuphela uhlobo C port lokutshaja ifowuni. Sele iphezulu apho i Iziphumo ze-3.5mm zomsindo.
I-ZTE yenze umsebenzi ogqwesileyo malunga noku, idala ifowuni enoyilo olunomtsalane, ukugqitywa komgangatho, ukubambelela okukhulu kunye nemvakalelo yokujongana nefowuni yenyani yenyani. Kwaye ukubona izibonelelo zayo, kuyacaca ukuba I-ZTE Axon 7 iyaqhubeka ukuquka elona banga liphezulu kwicandelo.
Iimpawu zobugcisa ekuphakameni kwinqanaba eliphezulu
Umzekelo I-Axon 7
Inkqubo yokusebenza I-Android 6.01 phantsi komaleko wesiko
Isikrini I-AMOLED 5.5 intshi nge-Corning Gorilla Glass 4 ukhuseleko / itekhnoloji ye-2.5D kunye nesisombululo se-Quad HD ye-1440 x 2560 pixels efikelela kuma-538 dpi
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 820 (ii-Kryo cores ezimbini kwi-2.15 GHz kunye ne-Kryo cores ezimbini kwi-1.6 GHz)
GPU Idilesi 530
Ikhamera esemva I-20 MPX ene-1.8 yokugxila ekugxilwe kuyo / i-autofocus / ukuzinza komfanekiso ozinzileyo / ukufumanisa ubuso / i-panorama / i-HDR / ithoni emibini ye-LED / i-Geolocation / ukurekhodwa kwevidiyo kumgangatho we-4K
Ikhamera yangaphambili 8 MPX ngokuvula okugxile kuyo f / 2.2 / ividiyo kwi-1080p
Ezinye izinto isivamvo somnwe weminwe / iTekhnoloji yeDolby Atmos / Inkqubo yeCharge ekhawulezileyo / isantya / ukugqiba kwesinyithi
Ibhetri I-3250 mAh ayinakususwa
Ubukhulu Ubukhulu: 151.7 x 75 x 7.9 mm
U bunzima I-185 gram
Ixabiso I-428 ye-euro kwiAmazon
Ukujonga kwiimpawu zayo zobugcisa kuyacaca ukuba I-axon 7 yeZTE irhamncwa. Nangona kuyinyani ukuba iQualcomm isandula ukwazisa Snapdragon 821, Kufuneka kuthiwe amandla eZTE Axon 7, ongezwe kuyo Imemori ye-4 GB ye-RAM, extol I-terminal entsha ye-ZTE ephezulu kwicandelo.
Ifowuni isebenza kakuhle, Andikhange ndiqaphele naluphi na uhlobo lwe-lag okanye lokuyeka akukho xesha kwaye, njengoko bekulindelwe, ndikwazile ukonwabela nawuphina umdlalo ngaphandle kwengxaki, nokuba ufuna umthwalo ongakanani na kwimizobo.
I-UI yam yeFavorite i-ZTE Axon 4.0 ilunge kakhulu
Enye yezinto zam ezincinci endizithandayo malunga neefowuni ze-ZTE yayilulungelelwaniso lwabo lwe-MI Favor. Unxibelelwano olucaphukisayo, olungenelelayo kunye ne-bloatware-egcwele interface. Kwimeko ye-ZTE Axon 7 kuya kufuneka ndiyivume loo nto, nangona Intandokazi yam ye-UI 4.0 Iyaqhubeka nokwenza ngokobuqu i-aesthetics yesiphelo ngendlela ephawulekayo, ukufana okumbalwa nge-Android emsulwa onokuyifumana, inyani kukuba ayicaphukisi kakhulu kuneenguqulelo zangaphambili.
Inguqulelo entsha yefayile ye- Ujongano lomenzi olwenzelwe wena lubonelela ngenqanaba eliphezulu labucala kunye nokusetyenziswa, Ukuthintela izicelo ezingasemva kwaye zisazise ngazo, inkcukacha endizithandayo kakhulu.
Ngale ndlela kuya kufuneka qwalasela ukuze izicelo ezinje ngeSpotify okanye i-Instagram zingavali ngokuzenzekelayo, kodwa xa sele sizicwangcisile ezi paramitha siza kubona ukuba ubomi bebhetri bukhula njani ngokubulela kule nkqubo.
Ukuthetha ngokubonakala, Intando yam ayinayo idrowa yeapp, usebenzisa inkqubo esekwe kwidesktop ebonwa kolunye ujongano lwabenzi baseTshayina abakhetha ukukhetha inkqubo ye-Apple OS. Nangona ndingazithandi izisombululo ezivela kwiCupertino, kufuneka nditsho ukuba ngokobuqu ndiyayithanda inkqubo yedesktop ngakumbi kwidrowa yesicelo, nangona uyayithanda imibala kwaye uyakhumbula ukuba ungasoloko usungula isindululi esikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso lo msebenzi.
Izaziso Kwisitshixo sokutshixa zifihlwe kwi icon emile njengentsimbi, endaweni yekhethini yesiqhelo. Inkqubo eyahlukileyo kodwa endingakhange ndithathe xesha lide ukuyisebenzisa. Isiphelo sam kukuba, nangona utshintsho kubuhle luphawuleka kakhulu, andinazo izikhalazo ezininzi malunga nolungelelwaniso lwesiko, luphuculwe kakhulu xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili.
Isikrini se-AMOLED QHD, indibaniselwano egqibeleleyo
Ukubheja kwe-ZTE Isisombululo se-QHD kwiflegi yakho entsha. Ngale ndlela iZTE Axon 7 inyusa a Iphaneli ye-AMOLED 5.5 intshi ndingenanto kwaye akukho nto ingaphantsi kwama-pixels angama-538 nge-intshi nganye. Zombini isisombululo, ukuqaqamba kunye nokuqaqamba kwemibala kuyabonakala xa uvula ifowuni.
Ukwenza oku umenzi unyanzelise ukugcwala kwemibala ukuya ngqo kumda ukuze kunganyanzelwa, kulunge xa ​​ukhetha ubushushu bombala ogqibeleleyo. Singayilungisa kodwa ndincoma ukuba uyishiye njengesiqhelo kuba kulapho imibala ilunge ngakumbi.
Iziphumo ezinkulu zizonke nge isisombululo siphezulu kakhulu kunokuba kufanelekile kwaye oko kusimema ukuba sifunde iiyure ngaphandle kokudinwa ngamehlo. Qaphela ukuba inqanaba lokuqaqamba lilungile, ukukwazi ukubona iscreen ngaphandle kwengxaki ngemini enelanga kwaye ii-angles zayo zokubukela zingaphezulu kokuchanekileyo.
Con Iikhithi ezingama-319 zokuqaqamba okuphezulu Iphaneli ingezantsi kwezinye iiphaneli ezinje ngeye Samsung Galaxy S7 Edge, kodwa ingaphezulu kokwaneleyo ukwenza ukubukela nawuphi na umxholo wemultimedia ube yinto eyonwabisayo. Kwaye okuninzi koku kufanelekileyo kuya kwicandelo leaudiyo yeZTE Axon 7, elinye lamandla amakhulu esixhobo.
Umgangatho wesandi onomdla okumema ukuba ukonwabele iimovie kunye nabahlobo bakho
Eli li candelo uninzi lwabavelisi ngelishwa lungahoyi. Kude kube ngoku yayiyi-HTC eyayilawula lo mbandela ngezithethi zayo zangaphambili kodwa i-ZTE ikwazile ukugqitha umenzi waseTaiwan ngenkqubo yesithethi kunye Itekhnoloji yeDolby Atmos.
Kuhlalutyo lwevidiyo oluphambili kweli nqaku ndikushiyele umzekelo ukuze uve into Isandi esithethi seZTE Axon 7 Ndithi kuwe, ngaphandle kwamathandabuzo zezona zilungileyo kwintengiso. Zilinganisa isandi esingqonge kwaye zikuvumela ukuba ukonwabele ngokupheleleyo nawuphi na umxholo wemultimedia okanye umdlalo wevidiyo, uxabise zonke izinto ezingafaniyo. Ewe ungabeki ivolumu kwindawo ephezulu, yehlisa inqaku ukuze isandi singaphazamiseki.
Ndibonise imizekelo eliqela kusapho nakubahlobo kwaye bonke bachukumisekile ngumgangatho wesandi. Ngokudibanisa ii-headphone, umgangatho ugcinwa kodwa ukuba ufuna ukwenza okungangoko kunokwenzeka, beka imovie okanye umdlalo kwaye udlale nezithethi zestereo ukubona amathuba esi siginali. Umsebenzi ogqwesileyo owenziwe yi-ZTE malunga noku.
Isivamvo esikhulu somnwe
Ndiyayithanda loo nto isivamvo somnwe Ime ngasemva ukuze isikhundla somfundi webhayometriki kwi-ZTE Axon 7 ibonakale ingaphezulu kokuchanekileyo. Nangona malunga nezinto ozithandayo, imibala.
Isikhundla sikhululekile kwaye kulula ukufikelela kuso, kwaye ukubambelela kwesiphelo kubiza umnwe wesalathiso ukuba uphumle kumfundi. Ewe kunjalo Inzwa isebenza kakuhle kufuneka uqiniseke ukuba ubeka umnwe ngokuchanekileyo kuba ngamanye amaxesha kundithathe ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuvulwa kwescreen. Kule meko, izisombululo zikaHuawei zihlala, kude kube ngoku, zezona zilungileyo kwintengiso.
Kukho abavelisi abakunyanzelayo ukuba uvule isikrini ukuze ukwazi ukuvula ifowuni, inkqubo endiyifumana iyacaphukisa. Ngethamsanqa kunye neZTE Axon 7 awudingi ukwenza ukuba isikrini sisebenze ukuvulaKonke okufuneka ukwenze ukuphumla umnwe wakho kwisifundi seminwe kwaye iya kuvula isiphelo sendlela kwangoko. Ilula kwaye ikhululekile
I-ZTE Axon 7 iyakumema ukuba udlale imidlalo kwaye ubukele iividiyo kwiscreen sayo, ngakumbi ngomgangatho wesandi onomdla. Kodwa wenza njani eyakho I-3.250 mAh ibhetri? Inyani yile yokuba ngaphakathi komndilili, ngaphandle kokuma kakhulu, nangona ingaphumeleli.
Ngale ndlela, ngokusetyenziswa kwesiqhelo, nge-avareji yeyure enye okanye iyure enesiqingatha, ukukhwela kwi-Intanethi nokusebenzisa iinethiwekhi zentlalo kunye neenkonzo zokuthumela imiyalezo kwangoko, ifowuni ihlale imini yonke. Ukuza ekhaya kwi-20-25% yebhetri. Ukukhawuleza kancinci ndifikelele kwiiyure ezisi-7 kwiscreen.
Awuyi kuba nexhala malunga nefowuni ekushiya ulele emini, nangona kusenokwenzeka ukuba kuya kufuneka uyibize ubusuku bonke. Ngethamsanqa inenkqubo elungileyo yokutshaja evumela ukuba sibe ne-100% yebhetri ehlawuliswe ngaphezulu nje kweyure. Y malunga nemizuzu engama-20 ibhetri iyakubiza phakathi kwama-30 nama-40% enokusisindisa nakungxama ngaphezulu kwesinye. Ndithe, ukuzimela okuhle kodwa ngaphandle kwempumelelo enkulu.
Ikhamera elungileyo eya kuthi ngaphezu kokuhlangabezana nokulindelweyo kwawo nawuphi na umsebenzisi
I-ZTE Axon 7 inyusa a 20 megapixel isivamvo Samsung ngasemva kunye nokuvula okuphezulu f / 1.8, ukuzinza komfanekiso ozinzileyo kunye neziphumo ezilungileyo ngokwenene. Ikhamera ye-ZTE Axon 7 isebenza kakuhle, ithatha i-shots egqwesileyo kwiindawo ezikhanyisiweyo kwaye iqhuba kakuhle kwiimeko ezikhanyayo.
Inyani yile yokuba eyona khamera iphambili yefowuni ibonelela nge- ukusebenza ngokugqwesileyo kunye nesantya esiphezulu ngokwenene xa kufikwa ekubambeni. Ukongeza, iapp igqityiwe, inika uluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka ngohlobo lokucoca kunye nemisebenzi eya kuvuyisa abathandi bokufota.
Kwaye njengesiphelo esihle esihle, i-ZTE Axon 7 inemowudi yekhamera yesandla esivumela ukuba sihlengahlengise nayiphi na iparameter ukuba sithathe iifoto ezigqwesileyo, sikwazi ukwahluka inqanaba lengxolo, isantya kunye ne-shutter, i-ISO kunye neminye imisebenzi esivumela ukuba senze onke amathuba ekhamera yayo enamandla.
Kwakhona ujongano lunomdla kakhulu esimema ukuba sihlale sidlala ngekhamera. Ugxininiso olukhethekileyo kwiziphumo ezifezekisiweyo nge-macro, kokubini kwindawo ekhanyayo okanye engacacanga kakuhle, abathandi be-blur baya kwaneliseka sisiphumo, ngakumbi ukuba badlala nocwangciso oluhambelanayo lwencwadana.
La Ikhamera engaphambili eyi-8 megapixel Ingaphezulu kokufezekisa umsebenzi wayo ngokuthatha iiselfies ezisemgangathweni eziya kukuvumela ukuba ukhuphe elona cala lakho libalaseleyo kwimowudi yobuhle. Ngamafutshane, ikhamera enkulu ethi, ngaphandle kokufikelela kumgangatho welensi ebekwe kwi-LG G5 okanye kwi-Galaxy S7 okanye kwi-S7 Edge, kufuneka nditsho ukuba iyandothusa into yokuba ndibengcono.
Imizekelo yeefoto ezithathwe nge-ZTE Axon 7
Ukuthathela ingqalelo oko i-ZTE Axon 7 ixabisa ngaphantsi kwama-euro angama-450 Kwaye ukubona amandla ayo, uyilo kunye neempawu ngokubanzi, kufuneka nditsho ukuba lolunye lolona khetho lufanelekileyo lokujonga. Ndithathekile ngumgangatho wesikrini sayo kunye nesandi esimangalisayo sezithethi zayo.
Ndikhumbula ngokungathandekiyo i-HTC One M7 yam endiyithandayo kunye nendlela abahlobo bam abandimonela ngayo xa ndibabonisa isandi sayo. Ndiyikhuphile ngaphandle kwedrowa, ndiyilayishe ndaza ndathelekisa isandi seetheminali zombini kwaye, nangona ilungu lokuqala kuLuhlu olunye luqhubeka ukogqitha uninzi lweetheminali ezikhoyo, Iziphumo ezifezekiswe yi-ZTE kweli candelo zibalasele.
Kwaye inyani yokuba ulusu lwayo lwesiko alusangeneleli kangako lwenza ukuba i-ZTE inyuke inotshi kubakhuphiswano bayo. Ukuba ilandela le ndlela, ndiqinisekile ukuba umenzi waseTshayina uza kuba ngumgangatho kwicandelo.
ZTE Axon 7 Gallery Gallery
Isiphelo esona sinexabiso elilungelelanisiweyo
Isikrini sinikezela ngokusebenza ngokugqwesileyo
Umgangatho wesandi sezithethi zawo uyamangalisa
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-ZTE Axon 7, le yeyona smartphone iphambili ye-Android enexabiso elifanelekileyo lemali
USilvia Abascal sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba kuyenzeka na ukwenza iposti apho ndicacisa khona ukuba uyisiphula njani i-Axon 7 okoko ndizamile iindlela ezahlukeneyo kwaye khange yenzeke kwaye, ukubanakho kokuyihlaziya kwi-nougat okoko uhlaziyo alukaphumi . Ukuba bekungenakwenzeka, ndingavuya kakhulu ukuba ungadlulisa ikhonkco / s ukuze ubenakho ukuzenza zombini.
I-PS: Ngaba unayo iAxon 7 esekwe?
Phendula uSilvia Abascal
Le yiNokia 6, iNokia yokuqala ene-Android
Meizu M3 Qaphela, uhlalutyo kunye noluvo